घर » सुटिङ » Phineas and Ferb Shoot The Alien
खेल जानकारी: Phineas and Ferb Shoot The Alien
विवरण: को insland मा, धेरै परदेशी छन्, Phineas AMD Ferb सबै परदेशी गोली मार गरेर यो insland rescure छ। तिनीहरूलाई यो मिशन पूरा सहयोग गर्नुहोस्।
खेल्नु: 24,821 ट्याग: phineas, phineas र ferb खेल, ferb खेल
phineas र ferb cowabunga Candace
Candace को सर्फ पदक जित्न मद्दत गर्नुहोस्। निर्देश: तीर कुञ्जीहरू प्रयोग सार्न स्पेसबारमा = चाल
phineas र ferb विदेशी बल
परदेशी धरती मा उतरा छन्। Phineas र तिनका साथीहरूले: Ferb, पेरी धरती मात्र तरिका परदेशी संग बल खेल्दै हो स्पेस आक्रमणकारिहरुमा देखि रक्षा गर्नुपर्छ। यो प्रतियोगिता जित्न मदत।
phineas र ferb Rainforest
Phineas त्यहाँ crocodiles धेरै छन् जहाँ जंगल, हराएको, आफ्नो मिशन Phineas crocodiles को पूर्ण नदी पार र खेल को सबै स्तर पारित गर्ने बाटो नेतृत्व गर्न छ
phineas खेल देखे
Pigsaw Ferb, इसाबेल्ला र पेरी kidnapped छ। Phineas तिनीहरूलाई उद्धार मदत!
phineas उद्धार ferb
Ferb गुफाको मा kidnapped थियो। कृपया Phineas साहसिक मदत, सबै राक्षस नाश र Ferb सुरक्षित।
phineas र ferb driff खेल
आफ्नो कार त यो रेस नयाँ डिज्नी च्यानल show.Design को वर्ण अन्तरक्रिया!
phineas र ferb: underworld साहसिक
Phineas र Ferb एक तातो गर्मी दिनमा रमाइलो! तिनीहरू धेरै सुन्दर गुफा underworld फेला परेन। तिनीहरूलाई रमाइलो र स्तर पारित गर्न क्षेत्र रंग सङ्कलन।
phineas र ferb: moletropolis देखि उम्कन
Phineas र Ferb को ड्रिल मर्मत र Candace गर्न आफ्नो बाटो वासस्थानमा पर्याप्त हीरे सङ्कलन मदत